အိပ် ပုတ် ကြီး တဲ့ သ မီး လေး တွေ ကို စိတ် ရှည် ရှည် နဲ့ နှိုး နေ တဲ့ မေ မေ ချစ် ​သု ​ဝေ ရဲ့ ဗီ ဒီ ယို …. - Real Gaming Myanmar
အိပ် ပုတ် ကြီး တဲ့ သ မီး လေး တွေ ကို စိတ် ရှည် ရှည် နဲ့ နှိုး နေ တဲ့ မေ မေ ချစ် ​သု ​ဝေ ရဲ့ ဗီ ဒီ ယို ….
By Realman / 1 week ago / Cele News / No Comments
ပ ရိ သတ် တွေ အား ကျ ချစ် ခင် ရ တဲ့ အိမ် ထောင် ရေး ကို ပိုင် ဆိုင် ထား တဲ့ အ ဆို တော် မ လေး ချစ် သု ဝေ က တော့ အ ရုပ် လေး တွေ လို ချစ် စ ရာ ကောင်း တဲ့ သ မီး ချော လေး တွေ ကိုလည်း ပိုင် ဆိုင် ထား သူ တစ် ဦး ပါ ။
သ မီး တွေ ကို အ ရိပ် တ ကြည့် ကြည့် နဲ့ ချစ် တတ် လွန်း တဲ့ မေ မေ ချစ် သု ဝေ က တော့ လတ်တ လော မှာ အိမ် အ သစ် လေး ကို ပြောင်း ကာ စ မို့ တစ် ယောက် တည်း အ လုပ် ရှုပ် နေ တဲ့ အ ကြောင်း နဲ့ မ နက် ခင်း လေး မှာ ကျောင်း သွား ဖို့ သ မီး တွေ ကို စိတ် ရှည် ရှည် နဲ့ နှိုး နေ ရ တဲ့ ချစ် စ ရာ ဗီ ဒီ ယို လေး ကို လူ မှု ကွန် ယက် မှာ ဝေ မျှ ပေး ထား တာ တွေ့ ရ ပါ တယ် ။
အ ဆို ပါ ဗီ ဒီ ယို လေး ကို ကြည့် ရင် တော့ သ မီး တွေ အ ပေါ် မေ မေ ချစ် သု ဝေ တစ် ယောက် အ ရမ်း ကို စိတ် ရှည် တာ တွေ့ ရ မှာ ပါ နော် ။
ချစ် ပ ရိ သတ် တွေ အ တွက် စိတ် ရှည် တဲ့ မေ မေ နဲ့ အိပ် ပုတ် ကြီး တဲ့ ချစ် သ မီး တွေ ရဲ့ ချစ် စ ရာ ဗီ ဒီ ယို လေး ကို ဖော် ပြ ပေး လိုက် ပါ တယ် နော် ။
မေ မေ ချစ် သု ဝေ က တော့ “ သ မီး လေး တွေ ကျောင်း ပြန်ဖွင့် ၊ မ နက် ၅ နာ ရီ ထ ချက် ပြုတ် ပြင် ဆင် ၊ ကျောင်းပို့ ၊ ကျောင်း ကြို ၊ သည်း သစ် လေး က အီ ဂျီ တစ် နေ့ ကို ၁ ဝ ကြိမ် အ ထက်အ ကြောင်း မဲ့ ပြ သါ နာ ရှာ ငို ၊ လူ လည်း အိမ် ပြောင်း စ တစ် ယောက် တည်း ငို ရ မ လို ရယ် ရ မ လို …
ဟော အိပ် သွား ရှာ တော့ လည်း ဒီ အ မေ မှာ ဟာ တာ တာ တင်း တင်း လေး ဖက် ပြီး အား ရ ပါး ရ နမ်း လိုက် တယ်.. မေ့ သ မီး လေး တွေ ပျော် ရွှင် ပါ စေ ” ဆို ပြီး မ နက် ၅ နာ ရီ က တည်း က သ မီး တွေ အ တွက် ပြင် ဆင် ရ တဲ့ အ ပြင် အိပ် ယာ ထ ဖို့ လည်း ချော့ နေ ရ တဲ့ သူ မ ရဲ့ဗီ ဒီ ယို လေး ကို ဝေ မျှ ပေး ထား တာ ပါ ။
အိပျ ပုတျ ကွီး တဲ့ သ မီး လေး တှေ ကို စိတျ ရှညျ ရှညျ နဲ့ နှိုး နေ တဲ့ မေ မေ ခဈြ သု ဝေ ရဲ့ ဗီ ဒီ ယို ….
ပ ရိ သတျ တှေ အား ကြ ခဈြ ခငျ ရ တဲ့ အိမျ ထောငျ ရေး ကို ပိုငျ ဆိုငျ ထား တဲ့ အ ဆို တျော မ လေး ခဈြ သု ဝေ က တော့ အ ရုပျ လေး တှေ လို ခဈြ စ ရာ ကောငျး တဲ့ သ မီး ခြော လေး တှေ ကိုလညျး ပိုငျ ဆိုငျ ထား သူ တဈ ဦး ပါ ။
သ မီး တှေ ကို အ ရိပျ တ ကွညျ့ ကွညျ့ နဲ့ ခဈြ တတျ လှနျး တဲ့ မေ မေ ခဈြ သု ဝေ က တော့ လတျတ လော မှာ အိမျ အ သဈ လေး ကို ပွောငျး ကာ စ မို့ တဈ ယောကျ တညျး အ လုပျ ရှုပျ နေ တဲ့ အ ကွောငျး နဲ့ မ နကျ ခငျး လေး မှာ ကြောငျး သှား ဖို့ သ မီး တှေ ကို စိတျ ရှညျ ရှညျ နဲ့ နှိုး နေ ရ တဲ့ ခဈြ စ ရာ ဗီ ဒီ ယို လေး ကို လူ မှု ကှနျ ယကျ မှာ ဝေ မြှ ပေး ထား တာ တှေ့ ရ ပါ တယျ ။
အ ဆို ပါ ဗီ ဒီ ယို လေး ကို ကွညျ့ ရငျ တော့ သ မီး တှေ အ ပျေါ မေ မေ ခဈြ သု ဝေ တဈ ယောကျ အ ရမျး ကို စိတျ ရှညျ တာ တှေ့ ရ မှာ ပါ နျော ။
ခဈြ ပ ရိ သတျ တှေ အ တှကျ စိတျ ရှညျ တဲ့ မေ မေ နဲ့ အိပျ ပုတျ ကွီး တဲ့ ခဈြ သ မီး တှေ ရဲ့ ခဈြ စ ရာ ဗီ ဒီ ယို လေး ကို ဖျော ပွ ပေး လိုကျ ပါ တယျ နျော ။
မေ မေ ခဈြ သု ဝေ က တော့ “ သ မီး လေး တှေ ကြောငျး ပွနျဖှငျ့ ၊ မ နကျ ၅ နာ ရီ ထ ခကျြ ပွုတျ ပွငျ ဆငျ ၊ ကြောငျးပို့ ၊ ကြောငျး ကွို ၊ သညျး သဈ လေး က အီ ဂြီ တဈ နကေို့ ၁ ဝ ကွိမျ အ ထကျအ ကွောငျး မဲ့ ပွ သါ နာ ရှာ ငို ၊ လူ လညျး အိမျ ပွောငျး စ တဈ ယောကျ တညျး ငို ရ မ လို ရယျ ရ မ လို …
ဟော အိပျ သှား ရှာ တော့ လညျး ဒီ အ မေ မှာ ဟာ တာ တာ တငျး တငျး လေး ဖကျ ပွီး အား ရ ပါး ရ နမျး လိုကျ တယျ.. မေ့ သ မီး လေး တှေ ပြျော ရှငျ ပါ စေ ” ဆို ပွီး မ နကျ ၅ နာ ရီ က တညျး က သ မီး တှေ အ တှကျ ပွငျ ဆငျ ရ တဲ့ အ ပွငျ အိပျ ယာ ထ ဖို့ လညျး ခြော့ နေ ရ တဲ့ သူ မ ရဲ့ဗီ ဒီ ယို လေး ကို ဝေ မြှ ပေး ထား တာ ပါ ။
Previous: မြန် မာ ပြည် အ တွင်း ရှိ လက် နက် ကိုင် ထား တဲ့ အ ဖွဲ့ အ စည်း များ စာ ရင်း
Next: လမ်းမပေါ် မစင်ထွက်ကျတဲ့ ချစ်သူလေးကို၊ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ချစ်သူကောင်လေး